fight - Synonyms of fight | Antonyms of fight | Definition of fight | Example of fight | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for fight
Top 30 analogous words or synonyms for fight
Faceless Void Bar ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် Team Fight တိုင်းကို ကြောက်စရာမလိုဘဲ ရှေ့ဆုံးက
Faceless Void Void ဟာ Main Carry တစ်ကောင်မဟုတ်ဘဲ Team Fight ပုံစံ အသုံးပြုရရင်တော့
Psychobilly တစ်ခုဖြစ်ပြီး Food Fight ဖျော်ဖြေမှုများကြောင့် လူသိများလာခဲ့သည်။ ကြက်ဥနှင့် ဂျုံအိတ်များကို စတိတ်စင်နားတစ်ဝိုက်တွင် လွှင့်ပစ်ခဲ့သည်။ Zulus နတ်မင်းကဲ့သို့ စင်တင်ပြီး စတိတ်စင်ပေါ်တွင် အသောက်အစားကစားပွဲများကျင်းပခဲ့သည်။ သူတို့သည် လူထုကို စတိတ်စင်ပေါ်တွင် သောက်စားစေ
National Socialist black metal မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမှု pagan နှင့် far fight တီးဝိုင်းများသည် ခရစ်ယာန်ဘာသာနှင့် ဂျုးဘာသာအပိုင်းကဲ့သို့ ဆာတ်မှုဝါဒကို သဘောပေါက်ဆင်ခြင်ကြသည်။ တစ်ချို့ non-political Satanic black metal ဂီတသမားများသည် pagan တီးဝိုင်းများကို မထီလေးစားဖွယ်ပြုမှုကြသည်။ သူတို့၏ စာသားများသည် ဆာတန်မှုဝါဒအကြောင်းမပါဝင်သောကြောင့် သူတို့ကို black metal ဟု အသိအမှတ်မပြုကြချေ။
Bullet for My Valentine မတ်လ၁၁ရက်နေ့တွင် တီးဝိုင်းသည် The Last Fight နှင့် Your Betrayal တို့၏ MTV ကိုဖြန့်ချီခဲ့သည်။ တီးဝိုင်း Fever ဖြန့်ချီသော အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် လန်ဒန်တွင် ဧပြီ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့သည်။
Queercore ၂၀၀၂ခုနှစ်တွင် Agitprop! Records က queercore တီးဝိုင်းများ ဂီတသစ်များပေါင်းစပ်ထားသည့် Stand Up & Fucking Fight for it album ကို ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ထိုalbum သည် ဤlabelမှ ပထမဆုံး ထုတ်ဝေခြင်းဖြစ်သည်။ အလှည့်ကျ ဖော်ပြစာရင်းတွင် queercore ဖျော်ဖြေမှုများနှင့် ထူးခြားသည်။
ဒိုတာ ၂ ဒိုတာ ၂ တွင် တစ်ခါတစ်ရံ၌ ရာသီအလိုက် ပွဲများ ကျင်းပပေးကာ ကစားနည်းပုံစံ အနည်းငယ်ပြောင်းလဲတတ်သည်။ ဟယ်လိုဝိမ်းပွဲများ၊ တရုတ်နှစ်သစ်ကူး New Bloom ပွဲတော်များ၊ ခရစ္စမတ်ပွဲတော်များတွင် ကစားနည်းအနည်းငယ်ပြောင်း၍ ဆော့ကစားရကာ လက်ဆောင်များလဲရရှိတတ်သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဒိုတာ ၂ တွင် အခြားသူများ တီထွင်ရေးသားထားတဲ့ Custom Game များကို တရားဝင်ခွင့်ပြုပေးလိုက်ကာ ထင်ရှားသည့် ဂိမ်းများမှာ Overthrow, Haunted Colosseum, Epic boss fight တို့ဖြစ်သည်။
Noise rock ၂၀၁၀ နောက်ပိုင်း noise rock များမှာ Roomrunner, Dope Body, Boy/Head, Perfect Pussy, Fight Amp, Whores, Bleeding Knees Club, White Spot, Kowloon Walled City, Nu Sensave, METZ, Riggots, The Noise, Grizzior, Dumb Numbers, War Baby, Ultrabunny, Black Light Brigadeနှင့် ဂျပန်အနုပညာရှင်များဖြစ်သည့် Nisennemondai, Akai Kouen နှင့် ZZZ’s တို့ဖြစ်သည်။
ဗွီ-၁ ဗုံးပျံ The next most successful interceptors were the Mosquito (623 victories), Spitfire XIV (303), and Mustang (232). All other types combined added 158. Even though it was not fully operational, the jet-powered Gloster Meteor was rushed into service with No. 616 Squadron RAF to fight the V-1s. It had ample speed but its cannon were prone to jamming, and it shot down only 13 V-1s.
အီမို Emo အမျိုးအစားသည် ၁၉၉၀ နှင့် ၂၀၀၀ အစောပိုင်းမှ အနုပညာရသများနှင့်အတူ ၂၀၀၀ တွင် တီးဝိုင်းများပြန်လည် နိုးထလာခဲ့သည်။ ကြီးမားသော underground ရွေ့လျားမှုနှင့်အတူ The World isaBeautiful Place & I’m No longer Araid to Die. A Great Big Pile of leaves, Pianos Become the Teeth, Empire! Empire! (I wasalonely Estate), Touche Amore The Hotelier နှင့် Into it. Over it တို့ပါဝင်ခဲ့သည်။ hardcore punkနှင့်အတူ emo တီးဝိုင်းများနှင့်အတူ Title Fightနှင့် Small Brown Bike တီးဝိုင်းတို့ပါဝင်သည်။